नेपालमा २ करोड १० लाख सक्रिय मोबाइल सेवाग्राही, कुन कम्पनीका कति ? - Technology Khabar
» नेपालमा २ करोड १० लाख सक्रिय मोबाइल सेवाग्राही, कुन कम्पनीका कति ?
नेपालमा २ करोड १० लाख सक्रिय मोबाइल सेवाग्राही, कुन कम्पनीका कति ?
Technology Khabar २४ माघ २०७५, बिहीबार
अनुज राज । काठमाडौं । नेपालका तीनवटा ठूला मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरुका कुल २ करोड १० लाख भन्दा बढि सक्रिय मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरु रहेको देखिन्छ ।
दूरसंचार प्रदायक कम्पनीहरुको सक्रिय प्रयोगकर्ताहरु (भीएलआर)को तथ्यांक नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले सार्वजनिक गर्ने नियमित एमआईएसको तथ्यांकमा भन्दा निकै कम रहेको देखिएको छ ।
आगामी दिनमा प्राधिकरणले मासिक सार्वजनिक गर्ने एमआईएस रिपोर्टमा नै समावेश गर्ने तयारी गरिरहेको बेला पहिलो पटक ३ ठूला मोबाइल कम्पनीहरुको पुस मसान्तसम्मको सक्रिय यूजर्स डाटा टेक्नोलोजीखबरलाई प्राप्त भएको छ ।
सो तथ्यांकअनुसार कुल नेपालमा सक्रिय मोबाइल सेवाग्राहीहरुको संख्या २ करोड १० लाख ३९ हजार २ सय ८२ रहेकोछ । जसमध्ये नेपाल टेलिकमको सक्रिय मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुको संख्या कुल हिस्साको तुलनामा करिब ३८ प्रतिशत रहेको छ भने स्मार्ट टेलिकमको सक्रिय प्रयोगकर्ताहरुको संख्या केबल २ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
अर्को मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सक्रिय प्रयोगकर्ताहरुको संख्याको आधारमा हेर्दा बजार हिस्सा ६० प्रतिशत हाराहारी रहेको देखिन्छ ।
प्राधिकरणकाअनुसार सरकारी टेलिकम कम्पनी नेपाल टेलिकमका सक्रिय प्रयोगकर्ताहरुको संख्या ७९ लाख ८१ हजार भन्दा बढि रहेको छ । टेलिकमले यो संख्यामा २जी, थ्रीजी र फोरजी सबै प्रयोगकर्ताहरुको संख्या एकमुस्ट समावेश गरेको छ ।
त्यस्तै स्मार्ट टेलिकमको सक्रिय मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुको संख्या ४ लाख ३८ हजार भन्दा बढि रहेको छ । स्मार्ट टेलिकमले फोरजी सेवा मात्र संचालन गरिरहेको छ ।
एनसेलको सक्रिय मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुको संख्या भने सबैभन्दा धेरै रहेको देखिन्छ । एनसेलसँग पुससम्म १ करोड २६ लाख ४९ हजार भन्दा बढि सक्रिय सेवाग्राहीहरु रहेका छन् । एनसेलसँग फोरजी प्रयोग गर्ने सेवाग्राही १५ लाख ८८ हजार भन्दा बढि रहेका छन भने एनसेलको थ्रीजी प्रयोगकर्ताहरुको संख्या ४५ लाख २२ हजार भन्दा बढि रहेको तथ्यांकमा देखिन्छ ।
यसअघि एनसेलसँग मोबाइल सेवाग्राहीहरुको संख्या १ करोड ६३ लाख ४१ हजार ५ सय ५८ जना रहेको तथ्यांक प्राधिकरणको मंसिर महिनाको एमआईएस रिपोर्टमा उल्लेख छ, जसमध्ये थ्रीजी प्रयोगकर्ताहरु ४६ लाख भन्दा बढि र फोरजी चलाउनेहरु १५ लाख ५७ हजार भन्दा बढि गरि कुल ६१ लाख ५८ हजार ५० जनाले ब्रोडब्याण्ड सर्भिस लिईरहेका देखिन्छन् ।
टेलिकमले पनि आफूसँग १ करोड ८६ लाख ७३ हजार ९ सय ५३ जना मोबाइल सेवाग्राही रहेको दाबी गर्दै आएको थियो र सोहि बिबरण प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सो बिवरणअनुसार टेलिकमसँग ५७ लाख ३७ हजार ३ सय ७० जनाले थ्रीजी चलाउने गरेका छन भने फोरजी चलाउने सेवाग्राहीहरु ६८ लाख ९ सय ४४ जना तथा ईभीडियो अर्थात टूजी प्रयोग गर्नेहरु १ लाख ३६ हजार ५ सय ७३ जना रहेको एमआईएसमा देखिन्छ ।
त्यसैगरि स्मार्ट टेलिकमसँग १९ लाख ३५ हजार ७ सय ५० जना ग्राहकहरु रहेको एमआईएस रिपोर्टमा उल्लेख छ, जसमध्ये ७५ हजार ५ सय ६० जनाले मात्र फोरजी चलाईरहेको देखिन्छ ।
सक्रिय मोबाइल यूजरको तथ्यांक र प्राधिकरणको मंसिरको डाटा हेर्दा टेलिकमले बिक्री गरेको सीम संख्या भन्दा आधा भन्दा कम मात्रले टेलिकमको सेवा चलाउने गरेको देखिन्छ । अर्थात १ करोड ८६ लाख ७३ हजार भन्दा बढि सीम बेचेको कम्पनीका सक्रिय यूजर भने केबल ८० हजारको हाराहारीमा रहेको तथ्यांकमा देखिन्छ ।
एनसेलसँग पनि एमआईएस रिपोर्टमा उल्लेख गरेको भन्दा कम मात्र प्रयोगकर्ताहरु रहेको देखिन्छ । एनसेलले १ करोड ६३ लाख ४१ हजार भन्दा बढि सीम बिक्री गरेको एमआईएसमा देखिन्छ जसमध्ये १ करोड २६ लाख ४९ हजारको हाराहारीमा मात्र सक्रिय यूजर्स रहेका छन् ।
स्मार्ट टेलिकमको सेवाग्राहीहरुको संख्या हेर्दा पनि अरु सेवा प्रदायकहरुको जस्तै देखिन्छ । स्मार्ट टेलिकमले १९ लाख भन्दा बढि मोबाइल सेवा प्रदायक रहेको दाबी गर्दै आएको भए पनि सक्रिय प्रयोगकर्ताहरु केबल ४ लाख ३८ हजार भन्दा केहि बढि छन् । जून प्रतिशतको आधारमा हेर्दा करिब २३ प्रतिशत हुन आउँछ ।
दूरसंचार प्राधिकरणले मोबाइल सेवा प्रदायकहरुको सक्रिय प्रयोगकर्ताहरुको तथ्यांक पनि आगामी दिनमा एमआईएस रिपोर्टमा समावेश गर्ने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले दूरसंचार कम्पनीहरुलाई आफ्ना सक्रिय मोबाइल सेवा प्रयोगकर्ताहरुको तथ्यांक उपलब्ध गराउन भनिसकेको छ ।
प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले आगामी दिनमा मोबाइलका सक्रिय यूजरको तथ्यांक समावेश गर्ने बारेमा छलफल भईरहेको बताए ।
‘भीएलआरको डाटालाई पनि हाम्रो एमआईएस रिपोर्टमा राख्ने विषयमा छलफल भईरहेको छ, हामीले कम्पनीहरुलाई तथ्यांक पठाउन भनिसकेका छौं,’ अर्यालले टेक्नोलोजी खबरसँग भने ।
उनकाअनुसार कुन महिनादेखि भीएलआरको डाटा एमआईएस रिपोर्टमा राख्ने भन्ने अझै यकिन छैन् ।
यदि सक्रिय यूजर्सको डाटालाई एमआईएस रिपोर्टमा पनि समावेश गर्न थालिएमा त्यसले हालको मोबाइल पहुँचको प्रतिशत भने घटेको देखिनेछ ।
प्राधिकरणले नेपाल स्याटेलाईट प्रालिको यूजर्स डाटा पनि एमआईएसमा राख्ने गरेको छ, तर यूनाईटेड टेलिकम लिमिटेड(यूटिएल)को प्रयोगकर्ताहरुको तथ्यांक भने एमआईएसमा छैन् । तीन ठूला कम्पनी बाहेक अन्य कम्पनीहरुको सेवा बन्द प्रायः भएको हुँदा ती कम्पनीहरुको सक्रिय मोबाइल सेवाग्राहीहरुको संख्या पनि निकै कम हुनसक्ने अनुमान छ ।
एमआईएस रिपोर्टअनुसार जनसंख्याको आधारमा हेर्दा हाल मोबाइल पहुँच १३२.८१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
प्रकाशित: २४ माघ २०७५, बिहीबार
क्यान महासंघको साधारणसभा सम्पन्न, डिजिटल नेपाल १ महिनामै शुरु गर्ने मन्त्री बास्कोटाको भनाई